Hindiya ayaa dhameystireysa buundada tareenka adduunka ugu dheer sanadka 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Tareenka » Hindiya ayaa dhameystireysa buundada tareenka adduunka ugu dheer sanadka 2022
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • Investments • News • Safarka Tareenka • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Buundada Tareenka ee Chenab waxay noqon doontaa buundada tareenka adduunka ugu dheer kadib marka la dhameystiro dhamaadka sanadkan
Xiritaanka Arch wuxuu ahaa mid kamid ah qeybaha ugu adag buundada Chenab
Mashruucan ayaa la filayaa in la soo afjaro ugu dambayn bisha Diseembar 2021-ka isla markaana uu cimri ahaan doono 120 sano
Buundada Chenab waxay ka mid tahay mashruuca isku xirka tareenka ee Udhampur-Srinagar-Baramulla ee dalka Hindiya
Hindiya Wasaaradda Waddooyinka Tareenka ayaa soo saartay bayaan ay ku shaacineyso in Tareenada Hindiya ay dhameystireen dhismaha birta birta ah ee Chenab Rail Bridge, taas oo noqon doonta buundada tareenka adduunka ugu dheer kadib marka la dhameystiro dhamaadka sanadkan.
Sida lagu sheegay bayaan, "Xiritaanka Arch wuxuu ahaa mid ka mid ah qeybaha ugu adag buundada Chenab, dhameystirkiisuna waa boodbood weyn oo loogu talagalay dhameystirka 111-km oo dherer ah oo isku xirta Katra ilaa Banihal."
"Waqtigan xaadirka ah, waxay qaadataa 12 saacadood wadada loo maro (Katra-Banihal), laakiin kadib marka la dhameystiro buundada, masaafada tareenka waa la kala badin doonaa," ayuu yiri maareeyaha guud ee tareenada waqooyiga Ashutosh Gangal.
Birtii ugu dambeysay, 5.6-mitir oo bir ah ayaa lagu rakibay barta ugu sarreysa waxayna ku biirtay labada gacmood ee qaansada ee hadda u kala fidsan labada dhinac ee Wabiga Chenab.
Buundada Chenab waxay ka mid tahay mashruuca isku xirka tareenka ee Udhampur-Srinagar-Baramulla ee dalka Hindiya (USBRL). Buundada oo dhererkeedu yahay 1,315 mitir ayaa waxaa lagu dhisayaa dhirir dhan 359 mitir. Markii la dhammeeyo, waxay noqon doontaa buundada tareenka ugu dheer adduunka, waxayna 35 mitir ka sarreysaa Taallada Eiffel.
Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in buundada ay awood u yeelan doonto inay iska caabbiso dabeylaha gaaraya 266kph, iyo sidoo kale dhul gariirro culeyskoodu gaarayo ilaa sideed, iyo qaraxyo xoogan oo xoogan.
Shaqada mashruuca, oo ay ku jiraan dhismaha buundooyin dhowr ah iyo godad dhulka hoostiisa mara, ayaa la bilaabay horaantii 2000, laakiin waxaa loo hakiyay caqabadaha dhismaha. Cudurka coronavirus ayaa sidoo kale ku darey dib u dhaca. Mashruucan ayaa hada lafilayaa in lasoo gaba gabeeyo marka la gaaro bisha Diseember ee sanadka 2021 wuxuuna cimri ahaan doonaa 120 sano.